Motivation for success :: तपाईँको सेन्चुरी बैङ्कमा खाता छ ? जेल जानुहोला नी !
प्रकाशित मिति : बिहिबार, मंसिर २ २०७८
काठमाडौँ – सेन्चुरी कर्मसियल बैङ्कका एक ग्राहक बैङ्कको बदमासीका कारण प्रहरीको चिसो कस्टडीमा बस्न बाध्य भएका छन् । बैङ्कको सुनसरी स्थित चतरा शाखाका ग्राहकको सोझोपनका कारण प्रहरीको कस्टडीमा बास भएको छ ।
‘मेरो खातामा पनि पैसा छैन भन्ने भयो । पैसा जम्मा हुँदा र झिक्दा के हुन्छ र भन्ने भएपछि मैले चेक दिएको हुँ’, प्रहरीसँगको बयानमा उनले भनेका छन् ।
पैसा निकाल्न बैङ्कमा पुगेका विष्टले खातामा पैसा नदेखेपछि प्रहरीमा उजुरी गरे । उनको उजुरीका आधारमा बैङ्कका कर्मचारी राई र चेक दिने पंकजलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अहिले प्रहरीले दुवै जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।